Uyifumana njani iHoopa Pokemon Go
0/5 Akukho voti
Xela le app
Ukukhuphela amakhonkco akusebenzi Kukho ingxelo entsha abanye
U-Hoopa, owokuqala kwi-Mythical Pokémon yommandla weKalos, kungekudala uza kuthumela umnxeba ezandleni zabadlali bePokémon Go ngenxa yeminyango yayo. Emva kweenyanga zokuqhula ngeeringi zayo, abadlali beqonga baya kuba nakho ukuthatha ulawulo lwelo gunya.
U-Hoopa uzakuvela kwingxelo ekhethekileyo yophando njengenxalenye yeXesha eliQhelekileyo leMischief, eya kuthi ibenabadlali abahamba ngeendlela zeMischief Pokémon kwiinyanga ezizayo. Abadlali baya kuba nakho ukuphonononga amanye amacandelo oPhando oluKhethekileyo ukuqala nge-5 kaSeptemba kwaye ekugqibeleni baya kuba nakho ukubamba iMischief Pokémon kwiFom yayo eQinisiweyo.
Abadlali kufuneka bafeze amaphepha ahlukeneyo emisebenzi yokuqhubela phambili ngokubaliswa, ngokufana noPhando oluKhethekileyo lwangaphambili olwenza ukuba abadlali babambe i-Mythical Pokémon njengoMew, Jirachi, kunye neMeloetta. Le misebenzi ibandakanya ukubamba iintlobo ezahlukeneyo zePokémon, ukuthatha iifoto, kunye nokunye, kodwa akukho zinkcukacha kwimisebenzi ekhokelela kukuhlangana kukaHoopa zichaziwe.
I-Pokémon nganye ye-Mythical yadibana ngoPhando oluKhethekileyo ine-backdrop eyahlukileyo, enje nge-Mew icenga umdlali ukuba asebenzise imo ye-AR ngelixa eshiya ngamanye amaxesha kwaye iMeloetta ibanjwa eqongeni. Xa abadlali bedibana neHoopa, iya kuthi isebenzise amakhonkco ayo ngandlela thile, ngokungathi ibisenza ukuhambisa iiNtsomi ezahlukeneyo zePokémon kunye nezilwanyana ezivela kwindawo yaseGalar ziye kwiPokémon Go. Nangona kunjalo, uNiantic akukaqinisekisi oku.
Xa inxenye yesibini yeXesha loPhando oluKhethekileyo lweMischief iqala nge-5 kaSeptemba, abadlali banokugqibela ukuhlangana neMischief Pokémon, iHoopa, kufutshane nakobuqu kwiPokémon Go. Nangona kunjalo, ukubamba iHoopa ayisosiphelo soluphando lukhethekileyo, okuthetha ukuba sinokuba sezimangalisweni ezantsi kwendlela.
Iiapps ezinxulumene noko
Uyenza njani into ebonakalayo yeefestile ezininzi kwi-Android
Ulufumana njani uphawu lwasekhohlo lweSoftware kuso nasiphi na isixhobo se-Android
Uyenza njani into yokuSayina uMyalezo wakho oNgagqibekanga weMiyalezo ye-Android
Ungayiseta njani iphepha lodonga lomntu oMntu ngamnye kwi-WhatsApp
Indlela yokudibanisa iifayile zePDF kwifowuni ye-Android ngo-2021
Itekhnoloji kunye neeGajethi
© 2021 - Onke amalungelo agciniwe - APKAnt